Iindaba - Isakhono sokugcina umnyango wamaplanga kunye nokuqwalaselwa ekusetyenzisweni kwemihla ngemihla
Isakhono sokugcina umnyango weplanga kunye nokuqwalaselwa ekusetyenzisweni kwemihla ngemihla
Kumhombiso wanamhlanje, ngenxa yomnyango wokhuni uneempawu zokuvala ubume bendalo kunye neziphumo ezahlukeneyo zokuhombisa, kuye kwaba lukhetho lwabantu abaninzi ukuhombisa igumbi. Ke emva kokuba ucango lweplanga lufakiwe, ungaqinisekisa njani ukuba ubomi benkonzo yomnyango wokhuni ugcina ixesha elincinci kwinkqubo yokusebenzisa? Kolu phephancwadi, uMajiang uza kwazisa ngezakhono zolondolozo kunye nokusetyenziswa kwemihla ngemihla kwezikhuselo kwiingcango zomthi ngokweenkcukacha. Masiyazi.
Ukucoca umphezulu. Ukucoca yonke imihla uthuli kunye nokungcola kumphezulu womnyango ngomthi ngumsebenzi osisiseko wokugcinwa, kodwa kufuna umonde. Xa ususa ibala phezu kocango lomthi, ilaphu elithambileyo lekotoni kufuneka lisetyenziselwe ukosula, kuba kulula ukukrwela umphezulu ngelaphu eliqinileyo. Xa ibala licace gca, ungasebenzisa iarhente yokucoca engathathi hlangothi, intlama yamazinyo okanye ifenitshala yearhente ekhethekileyo yokucoca. Emva kokususa ibala, sula wome. Sukuyihlamba ngamanzi. Ingqwalaselo engaphezulu kufuneka ihlawulwe kwinto yokuba ilaphu elifakwe i-reagent engathathi hlangothi okanye amanzi akufuneki abekwe kumphezulu womnyango weplanga ixesha elide, kungenjalo uya konakalisa umphezulu kwaye utshintshe umbala okanye ucime izinto zokugqiba umphezulu. Ukongeza, naka ingqalelo kwiikona zomnyango weplanga, musa ukuzihlikihla kakhulu, kungenjalo iya kubangela ukuba ipeyinti yekona iwe. Uthuli kwiingcango zomthi lunokucocwa ngesicoci.
2. Ukongeza kwimizamo yokucoca umphezulu yokwenza kakuhle, izinto zomnyango zokhuni kufuneka zigcinwe ngononophelo. Ngenxa yeempawu zokwehla komile kunye nokwanda kokufuma, ukuqhekeka kancinci okanye ukuncipha kunokubakho xa ubushushu kunye nokufuma kuhluke kakhulu. Into esifanele siyazi kukuba ngotshintsho lwemozulu, ukuncipha komthi kunye nezinye izinto zizinto zendalo. Kodwa ukuba umgangatho wocango lomthi awulunganga, okanye umnyango wokhuni awuzizo iimveliso ezifanelekileyo, ucango lomthi kulula ukulugqwetha. Ke ngoko, khetha umgangatho womnyango wokuqala wamaplanga, ukuba nje awunabungozi, akukho lula kakhulu ukuba ungavela uqhekeke.
3. Iinkcukacha zihambelana nobomi benkonzo yeengcango zomthi. 1. Ukujonga umthwalo wokulayisha emnyango, kuyimfuneko ukunciphisa ukuxhoma izinto ezinzima kumagqabi omnyango, ukunqanda ukungqubana kunye nokukrwela izinto ezibukhali. Xa uvula okanye uvale ucango, musa ukusebenzisa amandla amaninzi kwaye ungabethi ucango lomthi. 2. Musa ukuvula iqhaga lomnyango ngezandla ezimanzi, okanye uchithe izinyibilikisi ezonakalisayo kwiingcango zomthi nezitshixo. 3. Kwihenjisi, isitshixo somnyango kunye nezinye izinto ezenziwa rhoqo kwizixhobo zehardware, ziqinise ngoko nangoko xa sele zikhululekile. Ukuba isitshixo somnyango asisebenzi, ungongeza isixa esifanelekileyo sepenisi amagwebu kumngxunya ongundoqo, kodwa musa ukwenza ioyile ngokungalawulekiyo. 4. Ukuba ufuna ukugcina umbala oqaqambileyo womnyango weplanga, ungahlala uxhuma ulondolozo lwawo. Ukuthintela inkathazo kulondolozo lweengcango zomthi kwixa elizayo, kufuneka wenze iinzame ngakumbi xa uthenga. Ngomnyango wokuqala wokhuni, into yokuqala ekufuneka uyiqwalasele kukukhetha uphawu oluhle, ukwahlula phakathi "kocango lwantlandlolo lwamaplanga" olubonakala kwintengiso. Kule mihla, imarike yentsimbi yokuqala ishushu. Ayinakukhutshelwa ngaphandle into yokuba ezinye iingcango zomthi ezingezizo zisetyenziswa njengeengcango zokhuni zentsusa. Kwaye ukunciphisa iindleko, umthi oshiyekileyo usetyenziselwa ukukrola, kunye nokuncamathisela kweglu kusetyenziswa ukukhohlisa konke ukukrola kweenkuni. Aba bantu kufuneka banike ingqalelo.
Apha, uMajiang uyakukhumbuza: abanye abavelisi abancinci bathenga izinto ezingavunyelwanga kwimarike yeenkuni kwaye baqhubekeke ngokuthe ngqo kwiimveliso ezigqityiweyo. Ukwenza lula inkqubo yemveliso, iinkuni ngaphandle kokulondolozwa kwempilo, ukuthambisa, ukuthambisa ifayibha kunye nokomisa kusingathwa ngokuthe ngqo kwaye kuthengiswe, kukhokelela kwinto yokuqhekeka kamva.